Amaqhinga okuFumana kwabaFundi kwiBlogger eNtsha | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 30, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kuthatha isibindi ukuzibophelela ekubhaleni ibhlog. Uzibeka kwiwebhu ngengxelo ebhaliweyo yeengcinga kunye nezimvo zakho. Oko kungafihli nto kukuvulela ukugculelwa kwangoko okanye, emva kokusebenza nzima, ixesha lentlonipho. Eyona nto ibalulekileyo, ubeke igama lakho emgceni- nawaphi na amathuba engqesho anokuphazanyiswa ngempazamo enye. Kuhle!
Useta ibhlog yakho kwi zebloga, TypePad or WordPress (kucetyiswa). Emva koko uhlala kwaye ucinge ngeposi yokuqala yebhlog… amakhulu eembono ajikeleza entlokweni yakho. Uqala njani? Ndixelela abantu ukuba bayenze nje kwaye bayigqibe ngayo. Ndiqale nge I-rant kwi-Mountain Dew yentengiso yesidlo sakusasa. Ngeposti yakho yokuqala, ngaphandle kokuba ligama elaziwayo, uqala ngegama elingu-zero kwaye, mhlawumbi, abafundi be-zero.
Ukuba bendisazi nje oko ndikwaziyo ngoku, ezi zithuba zilandelayo zinokuba zahlukile kancinci. Andizisoli ngendlela endiyenzileyo, kodwa ngokuqinisekileyo bendinokubafumana abafundi abatsha ngokukhawuleza okukhulu. Bendingagxili kubafundi, bendizama nje ukuziqhelanisa nokubhala yonke imihla okanye kunjalo kwaye ndizive ngathi. Indlela ebhetele endinokuyithatha ibiya kuba kukubhala iimpendulo ezinkulu kwezinye iiposti zebhlog. Ndifunde iibhlog ezininzi ngaphambi kokuba ndiqale kodwa andijoyanga kwincoko. Ukuba bendiyenzile loo nto, iibhlog ezininzi kunye Udumo ngewuyifundile ibhlog yam kwaye usenokuba ukhuthaze ukubhala kwam.
Icebo #1 Kunye nezinye izithuba ezitsha, bhala ngezinye zezithuba ezikwibhlogosphere ukuze uqalise ukufundwa kwakho. Qiniseka ukuba usebenzisa trackBacks.
Emva kwezithuba zakho zokuqala, mema (ukunyoba, ukufuna, ukucenga, ukugrogrisa) abahlobo bakho ukuba bafunde kwaye bavakalise izimvo zakho. Amagqabantshintshi abolekisa ukuthembeka kwibhlog kuba inika abafundi umbono wokuba bacinga ntoni ngabafundi bakho kwindawo yakho KANYE nokuba ibhlog yakho kufanelekile ukuba uphawule ngayo. Ukuba uyazi ezinye iibhlog, bakhuthaze ukuba baphonononge ibhlog yakho kwaye baphose 'ikhonkco lothando'.
Icebo #2 Yakha amanye amagqabantshintshi kwaye uzame ukufumana ezinye iindlela zokulandela umkhondo kwiibhlog ozaziyo.
Kulungile, uye kwivenkile yobuhle wayokucheba iinwele ezintle, ngoku lixesha lokuba unxibe kwaye ubonise umbethe omtsha! Zigalele kuluntu nakwiindawo zokubhukisha ezentlalo. Xa ndanceda uJD aqalise ibhlog yakhe, Mnyama kwiShishini, Ndifumene i-JD yokujoyina i-MyBlogLog emva koko ndathumela ibhlog yakhe kwiindawo ezininzi zokubhukisha ezentlalo, ikakhulu StumbleUpon. IStumbleUpon ayifuni sithuba sokwenyani- unokufaka inkcazo kunye nezinye iithegi. Abasebenzisi beStumbleUpon abanomdla ofanayo baya kuthanda khubeka kwibhlog yakho kwaye uninzi luya kunamathela ngenxa yomdla oqhelekileyo.
Icebo #3 Thatha ithuba lothungelwano oluthile lokubloga kunye neendawo zokubhukisha zentlalo.
Njengoko uqhubeka nokubhala, qiniseka ukuba hlalutya umxholo wakho. Oko kuya kukubonelela ngengxelo yezithuba apho iindwendwe zifumana uninzi kunye nezithuba ezineyona hits. Kunye nokujonga kwakho kumagqabantshintshi akho, ngoku unokufumana umfanekiso wesalathiso sokuthatha umxholo webhlog yakho. Yiya kuwo! Lather (coca umxholo wakho), hlamba (lahla inkunkuma) kwaye uphinde. Qhubeka uyenza kunye nezithuba ezingama-500 kamva awuyi kukholelwa ukuba ufumene kude kangakanani.
Icebo #4 Lather, hlamba, phinda.
Icebiso lokugqibela: kunqande ukungabinamali apho. Nanku umthetho wesithupha: nayiphi na indawo 'yokuBloga ephezulu' efuna ukuba ufake ibheji, ibhena, okanye nayiphi na enye imifanekiso, hlala kude. Akukho lungisa ngokukhawuleza kwibhlog. Udumo luthatha ixesha, ukwakha ukufunda kuthatha ixesha, kwaye ukwakha 'ukufumaneka' kwiinjini zokukhangela kuthatha ixesha. Gwema nayiphi na indawo yokubloga eya kunyusa ibhlog yakho ngokubeka umzobo kwibhlog yakho.
Icebo #5 Kulumkele ukubeka imizobo kwindawo yakho ebonisa ukuba ubhengeza nje into ebumbekayo yokufaka ibhlogi enganiki crap malunga nawe.
Mar 31, 2007 ngo-3: 25 AM
Iposi enkulu, uDoug.
Ukushiya izimvo ezilungileyo ngokuqinisekileyo kuyindlela elungileyo yokufumana ukufundwa- ubungowokuqala ukugqabaza kwibhlog yam, kwaye bendi ngumfundi ozinzileyo webhlog yakho ukusukela ngoko. 😉
Ingcebiso engakumbi endinokwabelana ngayo yile yokuba ndikunike ibhlogi ukuba ijongeke kwaye uzive- ungayenzi ibe nzima kakhulu, kuyingozi ukusebenzisa ii-plug-ins ezininzi kakhulu ezongeza izinto ezipholileyo. Uninzi lwezo zinto ziluncedo kuqala xa ufumene inani elikhulu lezithuba.
Njengoko uDoug sele ekhankanyiwe ngaphambili, kufuneka ube nenkuthazo ethile egcina abafundi bebhlog yakho; uninzi luza ngenjini yokukhangela, kwaye inokufunda kuphela ungeno oluthile. Ukuba, nangona kunjalo, bonisa ezinye izithuba ezinxulumene noko ekupheleni kwezithuba zakho, banokuhlala ithutyana, kwaye buya, Nathi!
Mar 31, 2007 ngo-9: 11 AM
Ingcebiso entle leyo! Khange ndiqonde ukuba ndingowokuqala ukunika izimvo kweyakho… intle loo nto! Ndiyakuthanda ukufunda ibhlog yakho!
Mar 31, 2007 ngo-4: 46 AM
Iingcebiso ezimangalisayo zeblogger ezintsha uDoug.
Ndithatha yonke into oyibhalileyo.
Sukuncama! Ngamanye amaxesha kuya kuziva ngathi uthetha eludongeni lwefiggin. Sukuba nexhala, abantu bamamele / babukele nangona bengaphenduli. Hlala kuyo!
I $ 0.02 yam nje
Mar 31, 2007 ngo-9: 14 AM
I $ 0.02 ixabisa isigidi seerandi, Tony! Iiblogger ziyakhathazeka xa zingafumani mpendulo zininzi… kodwa inyani yile yokuba i-98% ukuya kwi-99% (ngokoqobo… ndizifundile ezinye izibalo) zabantu abatyelele ibhlog yakho ngekhe bashiye nezimvo. Ke khumbula abantu bafunda kwaye wenza umsebenzi omkhulu!
Yimarathon, ayisiyiyo i-sprint.
Mar 31, 2007 ngo 1:56 PM
Doug, inkxaso yakho ibaluleke kakhulu kwaye ngaphandle kwesikhokelo sakho bendizabalaza. Inqaku yile, kuyanceda ekufuneni ukuba nomntu onamava ngakumbi okukunceda uqonde ukuba ulungile okanye uzenza isidenge. Ngokubhekisele kwiindawo zonxibelelwano, thetha ngezinye iisayithi kwaye uzazise. Thumela rhoqo kwaye uye apho intliziyo yakho ikuthwala khona. Ndinebhlog yeshishini kodwa ndikwaphawule ngezopolitiko zemidlalo.
Umcebisi wam kunye nomzekelo wam nguDoug Karr, inombolo 3000 into ehlabathini. Kube mnandi ukubukela ibhlog yakhe ukufumana abafundi ngexabiso elimangalisayo.
Mar 31, 2007 ngo 2:01 PM
Enkosi, JD! Ndicinga ukuba umsebenzi womqeqeshi uhlala ulula xa ene-superstar asebenze nayo!